2019 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ - NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့် Beat အသုံးပြုပုံ NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့် - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက်
Home » 2019 NAB ပြရန် » 2019 #NABShow - နေ့ 1 အသုတ်စုံ
ယနေ့ 2019 ၏ပထမဦးဆုံးနေ့ NAB ပြရန် - နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအဆင့်မယုံကြည်သောသူတို့ပင်ဖြစ်သည် !!! တံခါးတရားဝင်ဖွင့်လှစ်ကြပါပြီ - ဒါပေမယ့်ငါနှင့်ငါ့သမားတွေကျနော်တို့လုပ်နိုင်သည့် NAB သတင်းအားလုံးစုဆောင်း-up, setting, ပြီးသားနာရီဒီမှာပါပြီ! အဆိုပါထိန်းချုပ်ရေး ROOM တွင်မြင်ကြသည်မဟုတ်လော သင်တို့အားငါဘယ်လောက်မပြောနိုင် NAB ပြရန် ငါ့ထံသို့ဆိုလိုတယ်! အစဉ်အမြဲငါကဒီမှာလာမယ့်ပါတယ်, ထိုသို့အမှန်တကယ်ငါ့ကိုတစ်စက္ကန့်နေအိမ်နဲ့တူပုံရသည်! စည်းဝေးရက်ပေါင်းများစွာအထိချဲ့ဒီတော့ ... ကြည့်ဖို့ဒါအများကြီးလုပ်ဖို့အများကြီး ... - ပဲဒါကြောင့်တက်ရောက်ရန်သောကြီးမားလူအုပ်ကြီးပြခန်းနှင့်အခြားပြုသောပူဇော်သက္ကာထဲကလူအစုအဝေးကြည့်ရှုနိုငျပါသညျ! မစိုးရိမ်ပါနဲ့ - ငါသညျ posted စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ် !!! ဒါ blogged-In နေဖို့!
တနင်္ဂနွေကျော်နှင့် The Show ကို၏တရားဝင်ဖွင့်လှစ်မီ, ရိုင်ယန် Salazar @vizrtofficial တည်ထောင်သူနှင့် CTO, Petter Ole Jakobsen, Celebro Group ကယ်စလီ Dodd နှင့်တီဗီထုတ်လုပ်မှုအထက်တန်းကျောင်းဆရာမစတိဗ် Vinton ၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်အတူတစ် panel ကိုတည်းဖြတ်။ #NABShow #vizrt #newtek
ဤအဘေ့စဘောစာလုံးကြီးထွက်များစစ်ဆေး! အဆိုပါ 2019 များအတွက်သစ် NAB ပြရန်!!!
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်ရှင် Debra Kaufman အင်တာဗျူးများ workflow နှင့်ပွနျလညျထူထောငျဆွေးနွေးခြင်း Grover ပြတ်သား, နည်းပညာ, @billbaggy နှင့် @ mtifilm ရဲ့ Larry က Chernoff ၏ SVP @sonypictures ။ #NABShow
Lumens 50 ကာလအတွင်းဗဟိုခန်းမအတွင်းတည်ရှိသော 360 စတူဒီယိုထဲမှာ VCA2019PN PTZ ကင်မရာနဲ့အတူတိုက်ရိုက်ဗီဒီယိုအားထုတ်လုပ်မှုပံ့ပိုးကူညီထဲမှာအသံလွှင့် Beat တွေနဲ့ ပူးပေါင်း. ဖြစ်ပါတယ် #NABShow ။ စတူဒီယိုနှင့် Lumens တဲအတွက်ကင်မရာထုတ်စစ်ဆေး #C159 ။
သဘောတူညီချက်များနှင့် Business Ops ၏ NAB ရဲ့ EVP ခရစ်ဘရောင်းနှင့်အတူ NABShow ရဲ့ COO, @ChrisOrnelasNAB @ ထံမှအင်တာဗျူးနှင့်အတူနေ့ကိုချွတ်ကန်။ #NABShow - Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌
ပစ်မှတ်ပရိသတ်ကိုအကြောင်းကို CEO ဖြစ်သူဂယ်ရီစာသင်သားနှင့်အတူဆွေးနွေးခြင်း, သစ်ထုတ်ကုန် @OpusDigitas, Inc Booth SU12707
opus Digitas Apex, ပြည့်စုံအသုံးပြုသူ-generated ကဗီဒီယို (UGV) စုဆောင်းခြင်း, ကြပ်မတ်လျက်စောင်ရေများအတွက်အသစ်တခုဖြေရှင်းချက်ပြနေသည်။ ပလက်ဖောင်းကိုအခြေခံပြီးတစ်ဦးက SaaS, Apex, အခွင့်အရေးကိုလွှဲပြောင်းဖြေလျှော့စစ်မှန်အာမခံနှင့်ထုတ်ဝေချောမွေ့စေရန်ဆန်းသစ် Workflows မှတဆင့်စစ်မှန်သည်အသုံးပြုသူ-generated ဗီဒီယိုများပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းဖြင့်အကြောင်းအရာသိုလှောင်မှုစကေးနှင့်တိုးချဲ့အလွယ်တကူနဲ့ထိထိရောက်ရောက်အဖွဲ့အစည်းများကူညီပေးသည်။ Apex ထုတ်လွှင့်နှင့်ဒေသခံရုပ်မြင်သံကြားဘူတာကိုဒေသခံသတင်း, အားကစားနှင့်မိုးလေဝသဗီဒီယိုမျှဝေသူသို့ကြည့်ရှုပြောင်းလဲမသာကြောင်းဆွဲဆောင်မှုကြည့်ရှုသူ-လှူဒါန်းခဲ့သောဗီဒီယိုများနှင့်အတူပရိသတ်ကိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးမြှင့်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်လည်းပိုပြီးဆောင်ရွက်နေပရိသတ်တွေအတွက်ကြည့်ရှုသူသစ္စာရှိမှုတိုးမြှင့်။
@ နှင့်အတူယနေ့ @NABShow စတင်ခြင်းFacilis နှင့် @BroadcastBeat! ရဲ့ shared သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်အကြောင်းပြောဆိုကြကုန်အံ့ #NABShow
ဤတွင်ကျနော်တို့ P2P ပေးပို့, လူမှုရေးမီဒီယာပေါင်းစည်းမှု, encryption ကိုဤမျှလောက်ပိုပြီးအကြောင်းကိုသင်ယူယနေ့များမှာ! တည်ထောင်သူ & CEO ဖြစ်သူဂျိမ်းစ် Broberg, Ph.D နှင့်အတူ @StreamShark ။ ⠀ Booth 11414 ⠀
သူတို့ Single-သင်္ကေတပြ-တွင် (SSO) နဲ့ပြည်တွင်းဖြစ်ရပ်များအဘို့မိမိတို့အော်ပရေတာ-ဖော်ရွေ Workflows ၏ပို့လိုက်ကြတယ်ပေးခြင်းနေ StreamShark တဲ, တိုက်ရိုက်စကားပြောခြင်း & ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း, P2P ပေးပို့ (atလုပ်ငန်း features တွေ) နှင့် Restreaming ပြုလုပ်ရန်အခွင့်အရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအနိမျ့ထိအန်ကုဒ်စင်းကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူထုံးစံ / လူမှုရေးခရီးစဉ်ဖြစ်သည်။ CEO ဖြစ်သူဂျိမ်းစ် Broberg မြောက်မြားစွာကမ္ဘာတွင်ပထမဦးဆုံးအတွေးအခေါ်များ, မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဤအာကာသအတွင်းစမ်းသပ်ချက်နှင့်တကွ, CDN, cloud computing နဲ့လွှနယ်ပယ်များတွင်တစ်ဦးအားအသိအမှတ်ပြုအတွေးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူကချိတ်ဆက်မီဒီယာနှင့် IP ကစီစဉ်တဲ့ဆွေးနွေးငြင်းခုံများအတွက်ဟောပြောရလိမ့်မည်။ ဂျိမ်းလည်းအော်ပရေတာ Friendly Workflows အပေါ်ဟောပြောချက်ပေးခြင်းပါလိမ့်မည်။
ယူလနျြ Sign SVP & GM ကဗီဒီယိုထုတ်ယူခြင်းနှင့်အတူ Fantastic အချိန် @SynamediaVideo ။ Booth SU10125
ပျော်စရာ #NABShow တကယ်တော့! ကျနော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကတည်းကတဲအင်တာဗျူးတွေ, စတူဒီယိုခရီးစဉ်နှင့်ပိုပြီးအဘို့အ 596 အချိန်ဇယားဆွဲတောင်းဆိုမှုများကိုခံရကြပြီ! အထဲကလွဲချော်နှင့် @NABShow တိုက်ရိုက်တစ်ဦးစတူဒီယိုခရီးစဉ်မရကြဘူး! www.broadcastbeat.com/studiotour/ @PLURABROADCAST @NewTekInc @TVUNetworks @Fluotec @လွန်စွာလိုလားသော @AxleVideo @Bitcentral
Grabyo သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်လွှတ်ပေးရန်, Grabyo အယ်ဒီတာအပါအဝင် cloud-based ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်သရုပ်ပြနေသည်။ ဖြစ်ခြင်း
ဘာပေါက်ကွဲမှု! သမ္မတ, အမေရိကက Mike ကယ်လီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှအဘို့တည်ဗီဒီယိုအားပလက်ဖောင်းအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုအတူဝေမျှ, Otto, မိုဘိုင်းနှင့်လူမှုရေးများနှင့်တိုက်ရိုက် Clip Booth SU2202 နှင့်အတူ @Grabyo
ပထမဦးဆုံးအကြောင်းအရာနှင့်ဈေးကွက်တစ်ခုအောင်မြင်သောဒီဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုကိုမဟာဗျူဟာဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပြီး, ပရိသတ်တွေယခုအချိန်တွင်အတွက်ကိုအပ်ခံရဖို့အကြောင်းအရာမျှော်လင့်အတူ Grabyo Editor ကိုလူမှုရေးဖြတ်ပြီးပရိသတ်တွေရောက်ရှိအလျင်အမြန်, ပြင်ဆင်ရန်ဖန်တီးအရည်အသွေးမြင့်ကဗီဒီယိုဖြန့်ဝေဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်အသင်းများကိုကူညီပေးသည်, မိုဘိုင်းနှင့် OTT ပလက်ဖောင်း။ Grabyo စတူဒီယိုရဲ့တိုက်ရိုက် clipping စွမ်းရည်နှင့် Grabyo ထုတ်လုပ်သူရဲ့အဆင့်မြင့်တိုက်ရိုက် streaming များရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအတူ, Editor ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့် Grabyo မှတဆင့် Real-time ကဗီဒီယိုထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ပြည့်စုံပလက်ဖောင်းများတွင်ထိုင်တော်မူ၏။ အဆိုပါ platform ၏ထိုးထွင်းသိမြင်ထုတ်လုပ်မှုကိရိယာများ, အကြောင်းအရာနှင့်အတူစျေးကွက်အရင်းအမြစ်များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်လူမှုရေး, မိုဘိုင်းနှင့် OTT ပလက်ဖောင်းကိုဖြတ်ပြီးပရိသတ်တွေကြီးထွားဖို့ပထမဦးဆုံးဖြစ်ဒစ်ဂျစ်တယ်အသင်းများကို enable ။
@MobilizedDebra @EpicGames LA က Lab က၏ဦးခေါင်းနှင့်အတူဆင်းထိုင်နှင့် @NABShow အပေါ် Arraiy ရဲ့ @b_dowdle ကို virtual ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ post အကြားလိုင်းများ၏ Blur အကြောင်းပြောဆိုရန်သတ်မှတ်ထားတိုက်ရိုက် Host ။ #NABShow - Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌
@touchstreamedia နှင့်အတူဂရိတ်စကားလက်ဆုံ #NABShow
သူတို့ရဲ့ပြုသောပူဇော်သက္ကာများထဲတွင် TouchStream မီဒီယာဖေါ်ပြခြင်း-ချွတ်နေသည်သူတို့ရဲ့ StreamE2E ™ - ထည့်သွင်းသည့် မှစ. ကြား၌ပရိတ်သတ်နှင့်အရာခပ်သိမ်းဖို့။ တဦးတည်းထိုးထွင်းသိမြင် cloud-based End-to-end visualization သို့သင့်ရဲ့ကွဲပြားခြားနားစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုဖြေရှင်းချက်ပေါင်းစပ်နှင့်သင့်ရိုးရာဟာ့ဒ်ဝဲ-based စောင့်ကြည့်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးအစားထိုးလိုက်ပါ။ StreamE2E ™နှင့်အတူ workflow နှင့်ပေးပို့တစ်ဦးပြည့်စုံအဆုံး-to-end ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပါ။
@AskGreenlight သုတေသနမန်နေဂျာ @alexis_macklin, @InfiniteRetina CEO ဖြစ်သူ @IrenaCronin နှင့် @cityrake မှာအထူးမိတ်ဖက်၏ဦးခေါင်း, မှာ Oliver Kibblewhite နှင့်အတူစွဲငြိဖွယ်ရာ၏အကြောင်းအရာစက်မှုလုပ်ငန်းဆွေးနွေးမှု၏ပြည်နယ်။ #NABShow @NABShow - Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌
Aperi မြောက်အမေရိကမှသေးငယ်, ထိရောက်မီဒီယာအစွန်းန်ဆောင်မှုများအတွက်ဒီဇိုင်း်ဖြေရှင်းချက်မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်
သူတို့ရဲ့အသစ်သောဆော့ဖ်ဝဲကို apps များနှင့်အင်္ဂါရပ်အကြောင်းပြောနေတာဟာ @AperiCorp တဲမှာ! #NABShow
ဈေးကွက်။ ဘက်ပေါင်းစုံ 10G switch ကိုအတူတစ်ဦးကတဦးတည်း-slot က microserver, အ A1101 အပေါငျးတို့သဘက်ပေါင်းစုံ V-Stack hypervisor အလွှာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်နှင့်ပဲတူ, ကွန်ယက်ကို adapter function ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ် codec, IP ကို ​​switch ကို, IP ကိုတံခါးပေါက်, ဒါမှမဟုတ်လုံခြုံရေးဖြစ်စေ, မည်သည့် Aperi app ကိုရှိကြတယ် စျေးကွက်-သက်သေပြ, ငါး slot က A1105 1RU server ကို။ တဲ SU13302 မှာ virtualized, အနိမ့်အောင်းနေချိန်၏ပံ့ပိုးပေးခြင်းနှင့်လုံခြုံမီဒီယာဝန်ဆောင်မှုများကိုတိုက်ရိုက်အားကစားထုတ်လုပ်မှုအပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလှူငွေဘို့စမတ် REMI နှင့် 4K-အသိဉာဏ်မီဒီယာအစွန်းဝန်ဆောင်မှုများကိုပြ၏, ခေတ်ရဲ့သွက်လက်, ချက်ချင်း re-တေးရေးဆရာမီဒီယာနှင့်ဇာတိအိုင်ပီတစ်ခုကျယ်ပြန့်အကွာအဝေး တံခါးပေါက်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့လုပ်ဆောင်ချက်များကို။ အားလုံးမီဒီယာ Re-Configure လုပ်လို့ရတဲ့ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများထဲကနေ functions များ, နှင့် IP Firewall နဲ့ NATing မှ multiviewing, အမှတဆင့်လက်လှမ်းအလွယ်တကူဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ apps များအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါ Aperi App Store မှာ.
စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အတွေ့အကြုံကို @သဟဇာတ။ ဗွီဒီယိုချုံ့အကြောင်းကိုဒါရိုက်တာဂျင်း Macher, အသံလွှင့်စျေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအမေရိကနှင့်အတူသင်ယူခြင်း, VOS, ထုတ်လုပ်မှု & Hybrid ကိုပလေးအောက်။ ပိုမိုမြန်ဆန် & ရိုးရှင်းတဲ့ဘဝစမတ်ပြုလုပ်ခြင်း။ ⠀ Booth SU810 ⠀
အဘယ်အရာကိုတစ်ဦးအတှေ့အကွုံ! ကျနော်တို့ရဲ့ CEO / မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာနှင့်အတူ @Nanoscosmos တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းဖြစ်ကြောင်း #OliverLietz ။ အကြောင်းသင်ယူရန်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အခွင့်အလမ်း #FanEngagement #E-အားကစား #ultralowlatency #တိုက်ရိုက်လွှင့်ထုတ် Booth SU8722
ကျနော်တို့ nanocosmos အပြန်အလှန်အသုံးပြုမှု webcasts, iGaming တူသောရောဂါဖြစ်ပွားမှု, အီလက်ထရောနစ်အားကစား, တိုက်ရိုက်လေလံနှင့်များစွာသောပို nanoStream တိမ်တိုက် & H5Live Player ကိုအတူ Ultra-အနိမ့်အောင်းနေချိန်တိုက်ရိုက်လွှင့်ဖွဘယ်လိုသင်ယူကြသည်။ ကမ္ဘာအနှံ့ပရိသတ်များအတွက်အစဉ်အလာထုတ်လွှင့်တီဗီမတူဘဲသိသိသာသာ IP ကို ​​bandwidth ကိုနှင့်တစ်ဦးပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြန့်ဖြူးအခြေခံအဆောက်အအုံလိုအပ်ပါတယ်သော။ အထူးသဖြင့်ဗီဒီယို On-demand content များအတွက်သက်တောင်စားချင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ကြောင်း အားဖြင့်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်လက်ရှိစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်. ဆွေးနွေးရန်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းစားသုံးသူဘက်မှထွန်းသစ်စနေကြတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ရှုခွန်အားနှင့်အမွေ၏အားနည်းချက်များကိုနှင့်ထွန်းသစ်စနည်းပညာများကိုဆွေးနွေးပါ။
ဖြစ်ရပ်မှန်များ DigitalDomainDD ရဲ့ဆရာယောဟနျစည်သွပ်ဗူး (@mediasherpa) @ နှင့် VortexImmersion ရဲ့ @edlantz @, တည်နေရာအခြေပြုဖျော်ဖြေရေး, @JoannaPopper များအတွက် VR ၏ HP ရဲ့ဌာနမှူး @, TheVRARLA ရဲ့ @TheJosephineM @ အတူရှင်းပြသည်။ @NABShow #NABShow - Las Vegas မှကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၌
Co-CEO ဖြစ်သူတွမ် Link ကို & ပူးတွဲတည်ထောင်သူစတူးဝပ် McLean @SnifferCat နှင့်အတူ Fantastic အင်တာဗျူး😎ကျနော်တို့လုပ်ငန်းဆက်လက်ရပ်တည်အကြောင်းအများကြီးသင်ယူနေကြတယ်, ထွက် Play & #AVOD #အားကစားဆိုင်ရာ #LiveEvent Booth SU 9910
အဆိုပါမြို့သတင်း Booth မှာ
TownNews သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမော်ဒယ်များအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့်ဒီဂျစ်တယ်ခေတ်များတွင်ပွင့်လန်းဖို့ဒစ်ဂျစ်တယ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူဒေသခံမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများရန်အတွက်လေ့ကျင့်သင်ကြား။ ၎င်းတို့၏ကိရိယာများနှင့်ပုံနှိပ်အတွက်ကျွမ်းကျင်မှု, ဒစ်ဂျစ်တယ်, ဗီဒီယို, OTT နှင့်ကြော်ငြာ, ထိထိရောက်ရောက်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဒိုင်းနမစ်စျေးကွက်များတွင်ရှေ့ဆက်-စဉ်းစားတွေးခေါ်မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းများ enable လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဝင်ငွေမပေါက်ပါဘူး။ ဒေသခံမီဒီယာများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အောင်မြင်မှု၏ 30 နှစ်သက်သေပြချက်တွင် track record လှုံ့ဆော်မှုကြောင့်, 2,000 သတင်းအဖွဲ့အစည်းများထက်ပိုသူတို့အထူးရှင်သန်မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်တည်ဆောက်ထားဖူးတဲ့ပလက်ဖောင်းနှင့်ကိရိယာများမှအကြိုးပါပြီ။
အင်တာဗျူးသောမတ်စ်တန်, # သမ္မတApantac အဘယ်သူသည်မြင်ကွင်းစုံ, Convertor, KVM နှင့် UHD အဆင့်မြှင့်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်သည်။ ထိုသို့သောအကြီးအတှေ့အကွုံမြား! Booth SL8006
AMT setup ကိုနှင့်မင်းသမီး NAB 2019 ဘို့အနေအထားများမှာ!
အားဖြင့်ရပ်တန့်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြင်ဘက်ပြပွဲတဲ 20023 မှာသတင်းစုရုံး၏အနာဂတ်တွေ့မြင်!
ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကုန်တင်ကားပြခွင့်ပြုဘို့ဖြစ်သော CBS / CW ဘူတာ KOVR / KMAX, ဂရေဟမ်မီဒီယာဘူတာ KSAT, Bonneville Itl ဘူတာ KSL, Fox News Channel, Peak uplink ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ!
နှစ်ဦးစလုံးလည်းထုတ်စစ်ဆေး Multidyne နှင့် EVS Display ရဲ့အပေါ် ပို. ပင်ကြီးမြတ် AMT ကုန်တင်ကားများအတွက်!
ဤတွင် @Pixel_Power မှာ #NABShow မာစတာထိန်းချုပ်မှု & ပလေးအောက်ကိုပြောနေတာ
pixel ပါဝါ ထုတ်လွှင့်ပလေးအောက်, အလိုအလျောက်, မာစတာထိန်းချုပ်မှု, ဂရပ်ဖစ် & linear ရုပ်မြင်သံကြားလိုင်းများတွင်အသုံးပြုအမှတ်တံဆိပ်, OTT နှင့် VOD များအတွက် software ကို-defined, virtualizable, ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဆုရအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်ပရိုမိုးရှင်းစနစ်များ, ဂရပ်ဖစ်-enabled မာစတာထိန်းချုပ်မှု Switcher နှင့်ခေတ်မီ switchable ဂရပ်ဖစ်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်များကိုထုတ်လုပ်သူများပြောင်းလဲနေသောတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနှင့်မည်သည့် SD ကအဘို့အ Pre-မှတ်တမ်းတင်ထားသောအကြောင်းအရာကယ်လွှတ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုပါ, HD, 4k, မိုဘိုင်း, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်လျှောက်လွှာ။ pixel ပါဝါ ဖောက်သည်ထောက်ခံမှုမှအင်ဂျင်နီယာစွမ်းရည်များနှင့်အပ်နှံ 30 နှစ်ပေါင်း '' အတွေ့အကြုံကရှိနေပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဘီဘီစီအဖြစ်စျေးကွက်-ဦးဆောင်ထုတ်လွှင့်အပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 2500 တပ်ဆင်ထက်ပိုဖောက်သည်နှင့်အတူ, Ericsson က, ITV, SWR, WDR, TV2 နော်ဝေး, Danmark ရေဒီယို, TV5 Monde, CBC, ဒစ္စနေး, Discovery, ESPN, ViaSat နှင့် Sky ။
ကျွန်တော်တို့၏ #NAB အဖွဲ့လက်ရှိတွင်ဒါဝိဒ်သည် Colantuoni တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်းသည် လွန်စွာလိုလားသော'' s ကိုဒုတိယသမ္မတ & ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာအပြောင်းအလဲနဲ့ဖြန့်ဝေဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမိတ်ဆက်နှင့်များ၏နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ဝေ လွန်စွာလိုလားသော မီဒီယာတေးရေးဆရာ
Dell က Technologies က Dell ကမှအပြည့်စုံနည်းပညာအစုစုကိုသငျသညျချောမွေ့စွာဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်ပုံကိုပြသ
သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ 49 လက်မ dual-QHD မော်နီတာအဖြစ်အချို့သောအေးမြထုတ်ကုန်ပြသဘယ်မှာ @Dell နှင့်အတူ Talking! #NABShow
လက်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလည်ပတ်ပိုကောင်းအောင်စဉ် Impact မီဒီယာအကြောင်းအရာကယ်နှုတ်တော်မူ။ သူတို့ရဲ့တဲမှာ, သငျသညျထုတ်ကုန်များ၏ Dell ရဲ့အစုစု Workflows အသွင်ပြောင်းဖို့ဦးဆောင်မီဒီယာ software ကိုဖြေရှင်းချက်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပုံကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးဆက်သစ်မီဒီယာန်ဆောင်မှုများစီးဆင်းမှုပြုကြရန်တွန်းအားပေးသည့်အခါကိုကြည့်ပါ Dell က EMCswitch Networking သိုလှောင်အပါအဝင် '' မြင့်သောစွမ်းဆောင်ရည်ဖြေရှင်းနည်းများ, Server များဖြင့် powered Precision Workstation Intel က® Xeon® အရွယ်မှာလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် display - အရောင်ဝေဖန်မော်နီတာ၏ Dell ရဲ့လိုင်းသင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏ workflow မှတဆင့်တိကျမှန်ကန်နေဖို့ကူညီနိုငျပါသညျ! "အဖွဲ့အစည်းများလျှင်မြန်စွာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အချက်အလက်များ၏ကြီးထွားလာအစုံနှင့်အတူအရှိန်အဟုန်ကိုစောင့်ရှောက်သောသူတို့သည်လည်းဒစ်ဂျစ်တယ်အသွင်ပြောင်းအားထုတ်မှုနှင့်အတူ သာ. ကြီးထိုးထွင်းသိမြင်မှုကို generate ကိုပိုမိုအဆင့်မြင့် applications များချမှတ်ပါတယ်," အက်ရှလေ Gorakhpurwalla, သမ္မတ, ဆာဗာများနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦစနစ်များဆိုသည်ကား, Dell က EMC။ "ဟုအဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်း-ဦးဆောင် PowerEdge server ကိုအစုစုကိုပင်အားကောင်း Making, ငါတို့ကပိုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်အစွမ်းထက်စနစ်များနှင့်အတူအပိုဆောင်းအလိုအလျောက်, ထိန်းချုပ်မှုနှင့်လုံခြုံရေးမှအကြိုးခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ဖွင့်နေကြတယ်။ "
ခရစ္စတိုဖာဂျေကို Shaw, အမှုဆောင်ဒုသမ္မတ, အရောင်းနှင့်စျေးကွက် @CobaltDigital Booth SL9111 နှင့်အတူ #EngineeringBeyondTheSignal #MasterControl #SignalTransport Otto & ချိတ်ဆက်-TV ကို
ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ် 4K နှင့် HDR Workflows များအတွက်openGear®ဘောင်များအတွက်ကဒ်-based ဖြေရှင်းချက်၎င်း၏အပြည့်အဝအဖြည့်ပြ, ထုတ်လွှင့်မှုအတွက်နည်းပညာများ၏နံပါတ်ဖေါ်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ခုEmmy® Award ဆုလက်ခံရရှိ "တိုက်ရိုက်အကူအညီပေးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဖြူးတီဗီ Links များအဘို့အရှေ့ဆောင်ယုံကြည်စိတ်ချရသောဂီယာ Method ကို။ " ဒီသူဟာ Emmy RIST အပေါ်သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်နိမ့်အောင်းနေချိန်ကဗီဒီယိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဘို့ခွင့်ပြုထားသည့်ယုံကြည်စိတ်ချရသောအင်တာနက်ကို Stream ပို့ဆောင်ရေး protocol ကိုများအတွက်အများအပြားကုမ္ပဏီများအားပေးအပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည် အင်တာနက်ကိုကျော် MPEG-2 အကြောင်းအရာ။ ဘော့ကိုလည်းစံမြှင့်တင်ရန်မတ်လနှောင်းပိုင်း၌တည်ခဲ့သော RIST ဖိုရမ်၏တည်ထောင်သူကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ "ကျနော်တို့ကသစ်ကို RIST protocol ကိုရန်အပြုသဘောတုံ့ပြန်မှုများကအားပေးအားမြှောက်, ကြှနျုပျတို့ NAB မှာ 4K နှင့် HDR ထုတ်လုပ်မှုဘို့ငါတို့အသစ်သောဖြေရှင်းနည်းများမျှဝေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်နေကြတယ်" ဟုခရစ်ကို Shaw, အရောင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး၏အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌကရှင်းပြခဲ့သည် ဘော့ဒစ်ဂျစ်တယ်။ "4K 4K အမှန်တကယ်ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့်အခြားအကြောင်းအရာကိုပံ့ပိုးပေးသဖြင့်ဖြန့်ဝေလျက်ရှိသည်နှင့် HDR ကိုစိတ်ဝင်စားကြောင်းကြီးထွားဖို့ဆက်လက်ဖြစ်စေမ, ထုတ်လုပ်မှုစံဖြစ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ openGear-based ဖြေရှင်းနည်းများ, process စောင့်ကြည့်ခြင်း, 4K နှင့် HDR အကြောင်းအရာဖြန့်ဝေရန်တတ်နိုင်ခြင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နည်းလမ်းများသည်။ "
ကားလို့စ် Ramos VP လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ Viaccess.Orca, အမေရိက @ ကိုယျ့ကိုယျကိုခံစားခြင်း။
Plura, ဦးဆောင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာက high-performance ကိုဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လွှင့်၏ထုတ်လုပ်သူနှင့်ဗီဒီယိုထုတ်လုပ်မှုဖြေရှင်းနည်းများ, ဝေမျှနေသည်
ray Kalo, Plura သမ္မတ & CEO ဖြစ်သူရိုင်ယန် Salazar မှာ၎င်းတို့၏စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့်အချိန်ကိုက်ဖြေရှင်းနည်းများကိုပြသ #NABShow
ထောက်ပံ့ခြင်း, အားလုံးအသစ်ကအနာဂတျအထောက်အထား SFP-H ကို, Hybrid ကို Monitor စီးရီးပါဝင်သောသူတို့ရဲ့အသစ်ကလိုင်းတက်ပေါ်တွင်ဂျပိန် ဟများထံသွားရောက်ကာထူးချွန် BLACK စွမ်းဆောင်ရည်ကယ်တင်တတ်၏တဲ့အဆင့် A-3 BIT OLED 224 "panel ကိုအတူပေါင်းစည်းထားတဲ့ကြော့ပါးလွှာသောဒီဇိုင်းကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ PRM-3-10G အပါအဝင် Fiber & IP ချိတ်ဆက်နှင့် PRM-24.5G စီးရီး။ "Plura အမြဲလာသောအခါလိုအပ်သောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်အကောင်းဆုံး tools တွေရောက်စေဖို့သန္နိဋ္ဌာန်ချထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက် IP ကိုကလေးမွေးစားခြင်းအများကြီးတွေ့မြင်နှင့် SFP-H ကိုစီးရီးတစ်ခုတည်း device အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူအချက်ပြမှုပုံစံများအပေါငျးတို့သ type ကိုစောင့်ကြည့်ဖို့ဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်, "Ray Kalo ၏နိုင်ငံတော်သမ္မတကပြောပါတယ် Plura အသံလွှင့်.
အိမ်ရှင်နှင့်အတူတည်နေရာအခြေပြုဖျော်ဖြေရေး Hologate ရဲ့ @GreggKatano, မျက်လုံးမေး Productions သမ္မတ, Jenny အော့ဒန်ဝင်း @ နှင့် PeriscapeVR ရဲ့ @LynnrosenthalVR @ @TwoBitCircus CCO နန်စီ Bennett က (@itfrom2bit,) ကပူးပေါင်း @BrianSethHurst ။ #NABShow @NABShow
ကျွန်ုပ်တို့၏နေ့ရက်ကိုအတူ @Vecima တက်အပူနေသည် #ClayMcCreery, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အခွန်ဦးစီးဌာနမှူး
Vecima ကွန်ယက် Inc ကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးမှလူများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများချိတ်ဆက်ဖို့ကွန်ယက်ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးလုပ်ပိုင်ခွင့်ကြောင့်အောင်မြင်မှုများနည်းပညာဖြေရှင်းချက်ကိုဆွေးနွေးထားပါတယ်။ cable ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် Vecima ထုတ်ကုန်အထူးသဖြင့်တောင်းဆိုမှုများစီးပွားရေးလုပ်ငန်းန်ဆောင်မှုစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, ဗွီဒီယိုနှင့်မြန်နှုန်း access ကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောနောက်ဆုံးမိုင်Solution®ခွင့်ပြုပါ။ အဆိုပါတပြိုင်တည်းအမှတ်တံဆိပ်အောက်တွင် operated Vecima ရဲ့ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာ Delivery နှင့်သိုလှောင်ရေးစီးပွားရေးလုပ်ငန်း, သိုလှောင်ကာကွယ်, ပြောင်းလဲ, high-တန်ဖိုးကိုမီဒီယာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပေးအပ်အာရုံစိုက်ကြောင်းစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ဖောက်သည်များအတွက်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့် software များပါဝင်သည်။ Kyle Goodwin, ကုန်ပစ္စည်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများ၏ကုမ္ပဏီ၏ဒုသမ္မတ, အန်ကုဒ်မျက်နှာပြင်-နှင့်မည်သို့အလွန်သိပ်သည်းကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော, high-throughput နှစ်ခုစက္ကန့်ကိုအောက်တွင်တစ်ဦးအောင်းနေချိန်နှင့်အတူတိုက်ရိုက်လွှင့်န်ဆောင်မှုများအများဆုံးအရည်အသွေးပေးပို့အောင်မြင်ရန်မည်သို့သို့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုဝေမျှနေသည် သိုလှောင်မှုဖြေရှင်းချက်မိုဃ်းတိမ်ကို DVR မွေးစားအရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်အသုံးချနိုင်ပါသည်။
ကောင်းပြီ, ထိုနေ့ရက်သည်တဦးတည်းဘို့ပါပဲ။ ဒါဟာထုပ်ပိုးပြီးပဲ! ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ပျော်စရာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်ုပ်တို့၏ရုပ်ရှင်သမားတွေ, အပေါငျးတို့သအင်တာဗျူးတွေ, ရှိသမျှထုတ်ကုန်,! ဒါပေမဲ့အဲဒီမှာဤမျှလောက်ပိုပြီးကြည့်ဖို့င် ... ပြီးတော့မနက်ဖြန်အခြားသောနေ့ရက်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ငါသူတို့ရဲ့မဆုပ်မနစ်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများအတွက်အသံလွှင့်ဘိန်ထမ်းများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချင်, ငါသည်လည်းအဖြစ်ကောင်းစွာ, အဆိုပါ Show ကိုဧည့်သည်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်! အခုတော့ - ရဲ့သူတို့ကိုပါတီများထိမှန်ပါစေ !!! နှင့်အညီ, နက်ဖြန်တိုင်အောင်, blogged-In နေဖို့သတိရ! 🙂
2019 2019 NAB 2019 NAB ပြရန် 2019 NAB ပြရန်ညီလာခံ 2019 NAB ပြရန်ပါတီများ 2019 NAB Show ကိုပါတီစာရင်း 2019 NAB Show ကိုပါတီပါတီများ ထုတ်လွှင့် Beat မဂ္ဂဇင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း အသံလွှင့်ကွန်ဗင်းရှင်း H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC စွဲငြိဖွယ်ရာ isovideo JCT-VC ကို NAB ပြရန် NAB ပြပွဲအလုပ်အကိုင်များ NAB Show ကို Las Vegas မှ Show ကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း NAB NAB2019 nabshow လူငယ်ကဏ္ဍ Show ကိုအမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆူညံသံလျော့ချခြင်း UHD / 4K / HD ကို	2019-04-08
နောက်တစ်ခု: 4G-Cross: ဒဿမဒီဇိုင်းတစ်ခု 12K လက်ဝါးကပ်တိုင် Converter ကိုကြေညာ